बे.न.पा. - २, ज्यामरुककोटमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार याम कार्की सहितको प्यानल बिजयी - worldwidetvnepal
वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार ०९:२७
म्याग्दी । देशैभर स्थानिय चुनाब बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो भने विभिन्न ठाउँको मत परिणामको नतिजा आउनेक्रम जारी छ । त्यस्तै बेनी नगरपालिका वडा नं. २ ज्यामरुककोटमा भारी मतान्तरले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार याम कार्की सहितको प्यानल बिजयी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन बिजयी भएपश्चात अबिर लगाउदै बधाई तथा शुभकामना दिने क्रम बढ्दो छ । यस प्यानलले पहिलो दिन बेनि देखि बगरफाट, खबरा सम्म बिजयी जुलुस कार्यक्रम गर्ने र धन्यवाद सहित खुशियाली कार्यक्रम जेठ २ गते २ नं. वडा कार्यालय परिसरमा नै गर्ने खबर प्राप्त भएको छ ।
बेनपा – २, ज्यामरुककोट सदरमुकाम बेनी बजारको नजिक भएतापनि बिकाशका हिसाबले धेरै पछाडि परेको ठाउँ हो । अबको नेतृत्व नवनिर्वाचित अध्यक्ष याम कार्कीले यसलाई मध्यनजर गर्दै बेनपा – २, ज्यामरुककोटको बिकाश गर्न र समृद्ध गाउँ बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । अब अवसर सङ्गै चुनौती पनि थपीएका छन् ।
गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नवनिर्वाचित अध्यक्ष याम कार्कीको प्यानलमा महिला सदस्य बबिता सापकोटा, दलित महिला सदस्य बिष्णु कुमारी सार्की, खुल्ला सदस्य तर्फ कृष्ण कार्की र चन्द्रकान्त रिजाल रहेका थिए ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका यामबहादुर कार्कीले १००२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका डम्मर सापकोटाले ७१८ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार सम्राट सापकोटाले ४० मत प्राप्त गरेका छन् । नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन रहेको छ ।
साथै म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र विभिन्न वडाहरुको मत गणना गर्ने कार्य जारी रहेको कुरा जानकारी आएको छ ।
हरेक चुनौती र बाधा अवरोधलाई सामना गर्दै आफ्नो वडालाई कसरी बिकाश तर्फ लैजाने भन्ने कुरा नवनिर्वाचित अध्यक्ष याम कार्कीले मनन् गर्न जरुरी छ । अबको करिब पाँच बर्षको कार्यकालमा बेनपा – २, ज्यामरुककोटका जनताहरुको मन जित्ने काम गर्न सकेमा याम कार्की लगायत गठबन्धनको प्यानलको हित हुने देखिन्छ । हाम्रो तर्फबाट सम्पुर्ण बिजयी टिमलाई हार्दिक बधाई सङ्गै सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछौं।
गीतकार निरोज भट्टको नयाँ दोहोरी गित “चोली ढाकाले” सार्वजनिक (भिडियो सहित)